Igumbi 3 - ISIKO langempela ENDLINI YE-PATRICIAN - I-Airbnb
Igumbi 3 - ISIKO langempela ENDLINI YE-PATRICIAN
Malosco, Trentino-Alto Adige, i-Italy
Ikamelo e-i-villa ibungazwe ngu-Alessandra
U-Alessandra unokuphawula okungu-37 kwezinye izindawo.
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Jul 3.
Ipulazi lakudala kusukela ngekhulu le-16 edolobheni elincane lase-Malosco e-Val di Non. Ilungiswe ngokuhambisana namasiko asendulo asezintabeni zeTrentino.
Ikamelo 3 linefenisha yakudala, nosinki wangaphakathi negumbi lokugezela langaphandle langasese. Inovulande obheke engadini yendlu.
Kodwa ngaphandle kwekamelo lakho, unokuningi.
Ingadi enkulu enezihlalo, izambulela nezihlalo zedekhi.
Ikhishi elivamile elinakho konke ukusetshenziswa okukhethekile kwazo zonke izivakashi zamakamelo e-Casa Atlanzia & Amafulethi . Ekhishini uzothola izitsha, amabhodwe, izitsha kanye nesethi eyisisekelo yamaphunga nama-condiments.
Indawo yokuhlala evamile netafula elikhulu lokudlela, lapho ungathola khona isidlo sasemini nesidlo sakusihlwa ngenkathi ujabulela izinto zakho ezikhethekile ongazilungiselela ekhishini elinakho konke okudingekayo
Futhi uma ngemva kokuhamba ngezinyawo ufuna itiye noma ikhofi, ungalilungiselela ekhishini elivamile futhi uhlale ngokunethezeka kwelinye lamasofa ozowathola egumbini elikhulu lokuphumula lase-Casa Imperzia.
I-ayini nebhodi loku-ayina, i-vacuum cleaner, nemikhiqizo yokuhlanza kuyatholakala. Isihlalo esiphakeme nombhede wengane uma kucelwa.
Ukunikezwa kokuqala kwezinto zombhede, amathawula okugeza namathawula asekhishini kufakiwe enanini. Ushintsho lwamashidi lapho kucelwa nangemali. Amathuba okupaka eduze kwendlu. Uma uhamba njengeqembu noma unomndeni omkhulu, ungaqasha amakamelo engeziwe (xhumana nombungazi bese umbuza ngokutholakala).
ubusuku obungu-7 e- Malosco
Unakho konke okusemandleni akho. Ihlathi nentaba, ukugibela amahhashi kanye negalofu, ukudoba kanye nokugwedla ngesikebhe.
Ibhayisikili, i-MTB noma ukuhamba ngezinyawo. Nsuku zonke ku-malga ehlukile ukunambitha imikhiqizo yayo, eyenziwe ekhaya nje.
Hlola ezinye izinketho ezise- Malosco namaphethelo